ओमिक्रोनको तेस्रो लहर सुरु; तत्काल स्कुल, कलेज लगायतका भौतिक उपस्थिति रोकौँ : प्रा.डा. जागेश्वर गौतम - Khabar Center
ओमिक्रोनको तेस्रो लहर सुरु; तत्काल स्कुल, कलेज लगायतका भौतिक उपस्थिति रोकौँ : प्रा.डा. जागेश्वर गौतम
२५ पौष २०७८
कोभिड संक्रमण रोक्नका लागि अब सबै संयन्त्रहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । यो सरकार, स्वास्थ्यकर्मी, आम नागरिकको साझा समस्या हो । यसलाई रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबैको जिम्मेवारी उत्तिकै छ । उसले गर्दा हुन्छ भनेर कसैले पन्छिएर हुँदैन, यसबिरुद्ध सबै पक्ष मिलेर जानुपर्छ । संयुक्त प्रयत्न गर्नुपर्छ अनिमात्र कोभिडको लडाई जित्न सकिन्छ, हैन भने धेरै मान्छे फेरि पनि संक्रमित हुने, मृत्युको जोखिममा पुग्ने खतरा हुन्छ । अहिले सुरु भएको कोरोनाको तेस्रो लहर घट्दैन यो बढ्दो क्रममा रहेको छ । यो बढिसकेको छ, सरकारले भन्न त बाँकी छ । सरकारले तेस्रो लहर आउन सक्छ भनिरहेको छ तर एउटा ब्यक्तिको हिसावले मैले भन्दाखेरी तेस्रो लहर सुरु भइसक्यो । रातोपाटी
प्रकाशित मिति :पौष २५ २०७८ आइतवार - १८:१३:३२ बजे